INOMTSALANE INJA CRATE - EKHAYA
Abantu bachitha imali eninzi kwizilwanyana zabo zasekhaya kunangaphambili. Inkqubo ye- Uqikelelo lweAmerican Pet Products Association Abanini bezilwanyana baya kuchitha ngaphezulu kwe-75 yeebhiliyoni zeedola kubahlobo babo abanoboya kwi-2019. Kwaye okwangoku, imarike isenziwa ikakhulu yimveliso yeenja ekhangeleka ngathi, zilungile, iimveliso zenja- hayi ukuba akukho nto iphosakeleyo kuloo nto. Kodwa abanye abanini bezilwanyana bafuna izinto ezenzelwe ukucinga.
Ngaphandle kokukhetha okungcono (kunye nokufikelelekayo), abanini bezinja banyanzelwa ukuba bathenge naziphi na iimveliso abanokuzifumana. Ndineenja ezimbini, kwaye andinakukuxelela ukuba zingaphi iibhedi zeenja, iithoyi, izitya, ii-leashes, kunye nezinye izinto esizithengileyo sathi Kulungile, asiyithandi, kodwa lolona khetho lubi kakhulu kwiqela , ke iya kwenza, emva koko uziva uzive kakhulu meh malunga neemveliso ezithethiweyo iminyaka. Ungandenzi nokuba ndiqalise kwiikreyiti zezinja zabo ezifihlakeleyo. Zizoyikeka, kodwa izinja zam zizisebenzisa yonke imihla. Ngaphandle kokuba siqeshe umchweli ukuze asenzele-ikreyiti yenja entle engabonakali njengekhreyithi yenja, akukho nto ndinokuyenza ngayo-kude kube ngoku.
Imakethi yeemveliso zenja eziyilwe ngokucinga ikhona. Kwaye ekugqibeleni, uphawu lwentengiso yesilwanyana Intsomi wenza okuthile ngayo. Intsomi isandula ukwazisa uluhlu olutsha lweemveliso zenja ezisebenzayo zombini kwaye yenzelwe kakuhle. Kukho ibhedi, isitya, into yokudlala ehlafunwayo, zonke izinto zendalo ezosulwayo, kunye necreme de la crème: ikreyiti yenja engabonakali ngathi ikreyiti yenja. Ndandilila.
Ityala: ngoncedo lweNtsomi
Ayikho enye ikona yentengiso yezilwanyana apho ukunqunyulwa phakathi kweemveliso zezilwanyana kunye neemveliso zabantu kugqithisile kunezixhobo zasekhaya, abaququzeleli beFable uSophie Bakalar noJeremy Canade baxelele iTherapy Therapy. Nangona iibhedi nezitya zibonakala kakhulu kumagumbi esihlala kuwo, ngokwesiko azange zidityaniswe kakuhle nakwizinto zangoku zokuhombisa ekhaya. Ke sicinge ukuba kunengqondo ukusebenzisa iilensi zoyilo ezisebenzayo kunye nobuhle obuncinci ukwenza iimveliso ezilinganise ngokugqibeleleyo ifom kunye nokusebenza.
Kwakubalulekile kwi-Bakalar kunye ne-Canade ukuba yonke into eqokelelweyo inenjongo. Naphi na apho babona khona ithuba lokuphucula kwizinto ezingakhathalelwanga kunye nezingaqulunqwanga kakuhle kwimveliso yenja, bayithatha-into ethi ngandlela thile, kungabikho mntu kwisithuba semveliso yezilwanyana eyenzayo kwinqanaba elikhulu.
Inombolo yeengelosi ezingama-711
Sikhethe imigca elula, ecocekileyo yazo zonke iimveliso kwaye sigxile kwiinkcukacha ukuze sikwazi ukuthethelela zonke izigqibo zoyilo kwindlela yokusebenza, iBakalar kunye neCanade ziyaqhubeka. Umzekelo, akukho sizathu sokudlala kufuneka sibe neon pink okanye tyheli, kuba izinja azikwazi nokuyibona loo mibala. Sikhethe imibala yala maxesha ethulisiweyo endaweni enokubonakala ilungile ekhaya kwiflethi yakho.
Ukuba ukhathazekile ziikreyiti zeplastiki kunye neenkuku zocingo, ikreyiti yenja kaFable iya kuziva njengempendulo ekudala ilindelwe kwimithandazo yakho yomzali wasekhaya. Yenziwe ngomthi kwaye umnyango unokuba sisinyithi okanye i-acrylic. Xa ucango luphantsi, lwenza ukuba ucoceke-ngathi ngathi umntwana wakho uyakuthanda. Kwaye xa umnyango uphezulu, uhlala ufihliwe, isitayile somnyango wegaraji. Ijongeka kakhulu njengetafile esecaleni ukuba uninzi lwabantu alunakuze luqonde ukuba yibhokisi yenja.
Intsomi ikreyiti$ 275Intsomi Thenga ngoku
Nathi singabalandeli abakhulu bebhedi yenja. Uya kuyithanda kuba ayinamanzi, inika ubungqina, kwaye ayanyangeki. Kwaye umntwana wakho uya kuyithanda kuba izaliswe ligwebu lememori elityumkileyo.
Intsomi Ibhedi$ 95Intsomi Thenga ngoku
Ezi ziqwenga zibaluleke kakhulu kwizithuba ezincinci xa ungenakukhetha ngaphandle kokubonisa izinto zenja yakho. Ayizukungena kuphela ekuhombiseni kwasekhaya, kodwa okona kubaluleke kakhulu, inja yakho iya kubathanda, nayo.
Umhleli woMxholo oPhawulweyo
UElizabeth nguMhleli woMxholo weBrand yoNyango lweZindlu kunye neKitchn. Uhlala kwisiXeko saseNew York nenja yakhe, iPearl.
Izipho ezingama-30 zexabiso leValentine zoSuku ezingaphantsi kwe- $ 30
Ukuba uhlala uziva ngathi umba kwiiSpredishithi, Lixesha lokuba uhlele i-Linen Closet yakho
Urenta njani kwigumbi elinetyala elibi, ngokukaBanini-mihlaba
4 4 4 intsingiselo
Ingelosi inombolo 1111 enentsingiselo
kuthetha ntoni ukubona ingelosi
Ingelosi inombolo 444 ubudlelwane